← ဝင်းတင်၊ ဦး (ဟံသာဝတီ)
၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၂:၃၇ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
မန္တလေးမြို့‎ ၁၁:၄၇ +၆၂‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ One word has been deleted. The ethnic group residing in MDY (here infobox >population_blank1) should mean the larger population of ethnic groups. It doesn’t, at all, mean “other ethnic groups don’t live in Mdy.”
အရေးမကြီး မန္တလေးမြို့‎ ၀၃:၅၉ -၄၇‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎
မန္တလေးမြို့‎ ၁၅:၀၇ +၁၉‎ ‎Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ →‎မီးရထားလမ်း စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
မန္တလေးမြို့‎ ၁၅:၀၅ +၄၂‎ ‎Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/ဝင်းတင်၊_ဦး_(ဟံသာဝတီ)" မှ ရယူရန်